Tsy maintsy manana Bac avokoa vao afaka mampianatra sy manabe. Jerena ny reclassement ho an'ireo tsy manana Bac nefa manana traik'efa.
Tafiditra ao anatin'ny mpanabe ireo mpitondra fivavahana, mopera, pastera, dekaonina, masera, mpitarika fikambanana sport sy mpitaiza.
Ho faritana tsara kosa ny afaka manangana Fiangonana, fa tsy ho lasa fihalofan'ny fanambakana sy fitadiavam-bola fisolokiana fotsiny. Fa tena sehatra hitaizana ny tanora. Akatona ireo secte mpisoloky mameno ny tanàna.
Ny sekolim-pinoana dia tsy mihoatra ny 20% amin'ny programa sy ny fotoana ampianarany ny resaka fampianarana finoana ao aminy. Sokajiana efa Fiangonana izy fa tsy sekoly intsony raha mihoatra an'izay.
Base, miampy 10% toy ny mpiasam-panjakana, izay ampitoviana ny grille indiciaire, mahazo trano, ary hiantohana tanteraka ny fahasalamana na public na privé.
Bac+3 miakatra: 1 000 000 Ariary/isam-bolana +10%
Bac - Bac+3: 500 000 Ariary/isam-bolana +10%
Ny mpampianatra eny amin'ny privé, dia ny Foibe no ameno ny efa omen'ny sekoly privé iasany.
Hiova ny momba ny tontolon'ny fampianarana, atao toy ny village écologique, na Tanàna maitso eo afovoan'ny nouvelle ville na tanàna vaovao aorina, ka ivon-toerana ny Sekoly, hisy ireo foto-drafitrasa toy ny bibliothéque, technologie, laboratoire, centre complexe sportif, trano hipetrahan'ny mpianatra, na internat raha sekoly ambaratonga fototra, hisy ny toerana cité des profs, na hipetrahan'ireo mpampianatra na mpanabe, ary ny toerana hipetrahan'ireo mpandraharaha, sy ny bureau administratif, ary ny centre de santé na ivon-toeram-pahasalamana an-tsekoly.
1- Ambaratonga voalohany: Manomboka amin'ny pré-scolaire ka hatramin'ny classe de 3ème
Atsangana isaky ny Fokontany (20 000).
2- Ambaratonga faharoa: BEPC - Terminal, Lycée
Atsangana isaky ny Kaominina (1 600).
3- Ambaratonga ambony: Polytechnique, Médecine, Agro, Technologique, Droit, Université
Atsangana isaky ny Faritra (3).
Atsaraina ireo fotodrafitrasa sy ireo sekoly efa misy.
Ampian'ny Fanjakana ireo sekoly tsy miankina anatsara ny fotodrafitrasa izay tsy maintsy manaraka ny fenitra maha sekoly azy.
Ireo mpianatra moa dia andray Bourse, cantine scolaire, trano hipetrahana.
50 000, Universitaires publics ou privés
Amin'ny alalan'ilay carte électronique, dia hisy crédit vary 150Kg, rano 15m3 ary éthanol 30 litres isam-bolana, isan-tokatrano ho azon'ny fianakaviana tsirairay. Hisy panneau solaire mitentina 1 500 000 ariary, izay averina 15 000 ariary isam-bolana, ao anatin'ny 10 taona.
B- Tetibola sy famatsiam-bola:
Ny karaman'ny mpiasa dia miala 1% isam-bolana, ary ny mpampiasa mandoa (3+2)%, ka ny 1% naloan'ny mpiasa sy ilay 3% mpampiasa, no miantoka ny fahasalamana, fa ny 2% naloan'ny mpampiasa no miantoka ny fampihofanana, na ny bourses scolaires.
Ny Foibe kosa, amin'ny alalan'ny budget d'investissement, izay azo avy amin'ny fampiasam-bola na amin'ny harena ambanin'ny tany, na ambonin'ny tany na an-dranomasina, na fiompiana, sy fambolena goavana, no anamboarany ny fotodrafitrasa rehetra.
Eo amin'ny 10 milliards de dollars ny vola entina anorenana foto-drafitr'asa, Village scolaire et Universitaire, sekoly sy fampitaovana.
6 milliards de dollars kosa no amatsiana ny Faritra 3 (2 milliards de dollars isaky ny Faritra) hampandehanana ny sekoly sy ny Oniversité ankoatran'ny tetibola izay efa azony amin'ny hetra isam-paritra.